Ziziphi iintlobo zekhowudi ye-backlink kunye nesakhiwo esilungileyo kwi-SEO?
Ngaphambi kokuba siqhubeke nokuhlaziya ikhowudi ye-backlink ephezulu kunye nesakhiwo esisetyenziswa ngokubanzi ngenjongo ye-SEO, makhe ndiqale ngeenkcazelo ezithile ezisisiseko. Ukubeka ngokulula, zonke i-backlink (ngaphandle koko, ikhonkco yewebhu engenayo) izalwa xa enye iwebhusayithi ine-URL ehola indlela eya kwelinye iqela lomntu wesithathu kwenye indawo kwi-Intanethi - ngendlela yokwenza ukhonkco, okanye ukongeza i-URL. Kwaye isethi yonke yezixhumanisi ezingenayo ezidalwe kwiwebhusayithi yenza iprofayili yayo. Ngale ndlela, iinjongo ezinkulu zophando ezifana ne-Google kunye ne-Bing ziyayisebenzisa ukuze zichonge ixabiso langempela, ukuthandwa, nokubaluleka kwewebhusayithi nganye okanye iblogi kwinqanaba. Ukuqwalasela ukuba akuyiyo yonke into edalwe ngokulinganayo, nje ukuzala i-backlinks ngokungalindelekanga ngenxa yobuninzi babo abayi kuyenza. Xa kuziwa kwisakhiwo se-organic link kwi-SEO injongo, le nto kukuba kuphela ikhonkco yeendaba eziphezulu, kunokuba ubuninzi bayo.
Njengoko sele ndithe, akubona bonke abazalwa ngokulinganayo. Yingakho, ngaphambi kokuba nantoni na enye, makhe senze umehluko phakathi kwezi zimbini zimbini eziphambili zeewebhu. Enyanisweni, ziyaziwa ngeempawu eziqhelekileyo ze-HTML kumgaqo we-backlink, kunye nefuthe eliqhelekileyo kuwo wonke iwebhusayithi kwi-SEO.
DoF ukulandela i-backlinks isetyenziswanga nje ukuxhuma amaphepha amabini ahlukeneyo kwaye "ukuxuba" ndawonye kodwa ukudlulisa nokubuyisela kwakhona imitha yamanqanaba kumabini omabini. Ukuthetha ngokwemiqathango jikelele, i-backlinks neDoF zivame ukuqatshelwa phakathi kwezinto ezininzi ezinokumisela, xa kuziwa ekunikezeni izikhundla zokucinga. Olu hlobo lweelunki lwewebhu lusetyenziswa ukunika uvavanyo oluvakalayo kwi-PA (umlawuli wephepha), i-DA (igunya lesizinda), i-PR (PageRank), kunye nezinye iimetriki ezifana nokuthembela komsebenzisi. Ngokuqhelekileyo, izixhumanisi ezinjalo zewebhu kunye nomfanekiso weDoF ngokulandelelana kwiikhowudi zabo zangaphambili zifakwe kwiintetho ezikhutshwayo, kunye neblogi okanye i-post posts. Maxa wambi bafumaneka kwizithuba zeforum kunye namacandelo okuphawula.
HayiLandela i-backlink yenzelwe ukuxhuma amabini ewebhu ahlukeneyo, i. e. , ngokukodwa ukulungiselela ukuhamba ngeenjongo kuphela. Kuthetha ukuba i-NoF elandela impawu yekhowudi ye-backlink ayifuni isibonelelo sephepha okanye ukudluliselwa kwamandla kwisizinda (a. k. a. qhagamshela ijusi). Gcina ukhumbule ukuba ukuhlukana okubonakalayo okwaneleyo kunokwenza uqikelele ngokwendlela yokukhwela kunye nokuchonga, kunye nokuhlaziywa kwamatriki amakhulu.
I-Backlink Code Structure kwi-SEO
Yintoni eyenza isiseko esisiseko se-backlink kwi-SEO? Enyanisweni, zonke ikhonkco ezinxulumene nazo ziquka ezi zinto zilandelayo: iteksi yokubhaliweyo ye-hypertext, itekisi yombhalo we-anchor, ukhonkco lwekhonkco, kunye nokuvala itekisi.
isiqhagamshelo siza kulandela, sichazwa kwaye sinempawu ekhethekileyo yombala ukuba sihlale kuwo wonke umxholo wokubhaliweyo wephepha.
Yonke i-hyperlink iphetha ngetekisi yokuvala, echaza nje iinjini zokukhangela malunga nokuvalwa kwe-tag yonk Source .